कसरी सम्भव भयो ओली-नेपालबीच वार्ता ? – MB Khabar
कसरी सम्भव भयो ओली-नेपालबीच वार्ता ?
MB Khabar ८ बैशाख २०७८, बुधबार
सत्तारुढ नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ ।
काठमाडौंस्थित होटल मेरियटमा बुधबार साँझ करिब साढे दुई घण्टा प्रधानमन्त्री ओली र नेपालबीच वान टू वान वार्ता भएको हो । बुधबार दिउँसो साढे १ बजेतिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल पक्षका नेता योगेश भट्टराईलाई टेलिफोन गरेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाए । भट्टराईले आफूलाई प्रधानमन्त्रीले बोलाएको अर्का नेता घनश्याम भुसाललाई जानकारी दिए र उनी बालुवाटार गए । बालुवाटारमा करिब डेढ घण्टासम्म प्रधानमन्त्री र नेता भट्टराईबीच कुराकानी भयो । यसक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रैबाट आफूमाथि घेराबन्दी भएको, सरकारलाई सहयोग नगरेको र प्रचण्डसँग मिलेर माधव नेपालले आफूविरुद्ध घेराबन्दी गरेको गुनासो सुनाए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि कसरी घेराबन्दी भयो भनेर लामो व्याख्या गरेका थिए । यसक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू मिलेरै जाने पक्षमा भए पनि अब अलग–अलग पार्टीका रुपमा चुनावमा जानुपर्ने स्थिति आउन लागेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको गुनासो सुनिसकेपछि नेता भट्टराईले सर्वप्रथम नेकपा एमालेलाई एकतावद्ध बनाउनुपर्ने र यसको पहल अध्यक्षको नाताले प्रधानमन्त्री ओलीले नै लिनुपर्ने बताएका थिए । द्वन्द्व समाधान गर्ने हो भने सम्वाद जरुरी पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले माधव नेपाल, वामदेव गौतम, झलनाथ खनालहरूसँग सम्वाद अघि बढाउनुपर्ने भट्टराईले बताएका थिए । भट्टराईको सुझाव पछि त्यहीँबाट प्रधानमन्त्री ओलीले बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई टेलिफोन गरेको बालुवाटार स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले नेता नेपाललाई फोन गरेर छलफल गरौं, बालुवाटार आउनुस् भन्नुभयो, तर नेपालले बालुवाटार आउँदिन भन्नुभयो’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि माधव नेपालले ओलीलाई आफ्नै घरमा आउन आग्रह गर्नुभयो, ओलीले घरमा त आउँदिन भनेपछि साँझ ६ बजे होटल मेरियटमा भेट्ने सहमति भयो । होटल मेरियटका दुई नेताबीच एक्लाएक्लै कुराकानी भएकाले के–कस्तो छलफल भयो भन्ने खुलेको छैन । तर, होटलमा भेटिएका ओली निकट नेता मोती दुगडका अनुसार छलफलपछि दुबै नेता प्रफुल्ल देखिएकाले छलफल सकारात्मक भएको पाइएको छ । यद्यपि भेटमा भएको कुराकानी दुबै नेताहरुले गोप्य राखेका छन् ।
सर्वोच्चको फैसला जनभावनाअनुसार : सभामुख
ओलीमा अहंकारमात्र बढ्यो : प्रचण्ड
स्वास्थ्यमन्त्री तामाङको १४ ठाउँमा जग्गा, २२ तोला सुन
एमसीसी सम्झौताबारे पढ्दै नपढी विरोध : प्रधानमन्त्री ओली
रेडक्रसमा हुने ‘राजनीति’ अन्त्य हुनुपर्छ: मन्त्री बाँस्कोटा